अन्तर्वार्तामै भँगेरी डनलाई हिरोइनले राखिन् प्रेम प्रस्ताव (भिडियो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्म ‘शब्द’ रिलिजको संघारमा छ । यहि पौष २९ मा रिलिज हुने फिल्मको लागी अहिले निर्माण टिम अनि कास्टिङ क्रियू प्रचार प्रसारमा व्यस्त छ । यो बीचमा प्रचारकै क्रममा रहेको कलाकार टिमले मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा लिड अभिनेता ए गुरुङ उर्फ ‘भँगेरी डन’ले अभिनेत्री कमली वाईवालाई प्रेम प्रस्ताव राखेका छन् ।
‘झोले’ फिल्मबाट ‘भँगेरी डन’को पात्रका कारण चर्चामा आएका ए गुरुङले रमाईलो गफगाफमा अभिनेत्री वाईवाबाट लभ प्रपोज पाए । फिल्म भित्रको पाटोहरुको बारेमा निस्किएको प्रसंगमा कमलीले हाँसीहाँसी ए गुरुङलाई ‘आई लभ यू’ बोलेकी थिईन् । क्यामेराकै अघि प्रपोज गरेपनि यो सबैकुरा रियल भने थिएन् ।
‘यात्रा’ न रोकिन्छ न पुरानो हुन्छ – निर्देशक सम्राट शाक्य
छक्का पञ्जा ४अर्को वर्ष नआउने, दिपालाई दिपकसँग नाम नजोडिने चिन्ता ( भिडीयो )
फिल्म क्षेत्र प्रति ऋषि धमलाको आपत्ति, सिन्डिकेट तोडेरै छोड्ने दाबी ( भिडीयो )
पूजाको कपालमा थप्पड, आकाशको टिर्सटमा किस ( भिडीयो सहित )
पहिलो पटक मिडीयामा कविता बाचन गर्दै आँचल शर्मा ( भिडीयो सहित )
श्रृष्टिको रोजाईमा किन परेनन् पल र प्रदिप ? कारण यस्तो ( भिडियो )